Omunye izikhungo zezempilo yesimanje, ayihlomele ezindinganisweni eziphakeme Wezempilo kuyona, nge imali inama saseTomsk esifundeni. Kuyinto owawina imincintiswano eminingi yesifunda futhi isiRashiya, owawina indondo "Crystal iconsi - Kuhle inkampani ku CIS nge ibhizinisi idumela lihle" Ukuvuselelwa kanye nokwenziwa Wellness Center "Keys" (saseTomsk). The yokungcebeleka itholakala ehlathini, endaweni okhiye okwelapha osekuyisikhathi eside waphulukisa izifo eziningi.
Phakathi izici isikhungo sezempilo kufanele ngokuthi izici eziningana ezinhle:
Indawo Dispensary ehlathini ikhuthaza climatotherapy. Ngesikhathi esifanayo izivakashi e ukubuyekeza kwabo bathi indawo enkulu Dispensary "Keys" (saseTomsk) / The yokungcebeleka itholakala kule ndawo. Keys 7 km ukusuka edolobheni saseTomsk.
Ukuba khona kwamanzi ithebula amaminerali kusiza ukunciphisa i-cholesterol ne-glucose egazini, emathunjini ukwelashwa ipheshana.
izimo yokuhlala Excellent, ezingeni lamanje yezokwelapha, zokwelashwa imishini yokuzijabulisa kungabuthinta ukusingatha anhlobonhlobo ukwelashwa. Kukhona indawo ehlukile izinqubo ukuthi akwenziwa kwesinye zokungcebeleka esifundeni.
Efaneleyo okusezingeni eliphezulu kwabasebenzi bezokwelapha, okuyinto ethuthuka kahle kakhulu esifundweni ukunakekelwa eyalandela iziguli eziyinkimbinkimbi ngemva kokushaya senhliziyo, kokuhlinzwa inhliziyo, imithambo main.
izindawo Excellent kahle, olunzulu (angaphezu kuka-30) uhlu spa zokwelapha, rejuvenation ubuchwepheshe besimanje idonse anhlobonhlobo izivakashi e Dispensary "Keys" (saseTomsk). Sibhedlela amanani ahlukene ezinengqondo futhi ukutholakala ezikhethekile sezempilo.
Imibandela kuhlala namanani
ukubekwa Izivakashi uphiwa 141 amakamelo ehlukene intengo izigaba (kungaba kanyekanye abantu 250.) Phansi 7th (lift).
inqubomgomo Intengo zincike isizini, asesigabeni kanye nenani storeys. Ngokolwazi olusemthethweni, izindleko namuhla lwezinyawo losuku olulodwa ngo-1995 4200 k. (Uma ukukhokha intengo ephelele). Uma uthatha uhambo ngaphandle kokwelashwa, intengo izobandakanya yokuhlala, ukudla kanye nezinsizakalo ukuzijabulisa eziyinkimbinkimbi.
Ngakho, Dispensary has mikhakha amakamelo:
3 yasendaweni inombolo (30 sq. Amamitha, futhi egumbini 1)
Igumbi 2 embhedeni-(14 sq. Amamitha, futhi egumbini 1)
1 ohlezi (14 sq. Amamitha, futhi egumbini 1)
Igumbi 2 embhedeni-(32 sq. Amamitha, futhi egumbini 1)
Small enezihlalo ezimbili (36 sq. M 2 igumbi),
2 enezihlalo ezinkulu (45 sq. M 2 igumbi),
2 enezihlalo ezinkulu, ngcono (48 sq. M 2 futhi ikamelo).
Ukuze abantu abakhubazekile kukhona wahlomisa ngokukhethekile 2 endlini enamakamelo. Kukhona handrails ekhethekile eshaweni, zangasese kwaguqulwa.
Zonke Igumbi: embhedeni, wezokwelapha, izakhiwo zokuphatha, igumbi lokudlela ibha, ngempilo nobungqabavu isikhungo bahlanganiswe ukuhwebelana efudumele.
Amandla sihamba 3 emahholo okudlela kwelinye shift. Ukudla Ukudla (15 indlela yokudla ehambisana nempilo), imenyu yakhelwe izinsuku ezingu-14, ngaphambilini 4 ukudla ngosuku (indlela yokudla ehambisana nempilo based. Amathebula). Abanesifo sikashukela ihlelwe 6 ukudla ngosuku.
I sibhedlela iyisikhungo zokulungisa i-Social Insurance Fund WaseRussia lucwaningo ukwelapha amavawusha inyunyana (10 kuya ku-21).
Ngaphezu kwalokho, bonke abantu anentshisekelo ithuba uphumule dispensaries, vakashela LOC ngentengo ephelele ku "Keys" -sanatory (saseTomsk). Intengo ye amathikithi ekwelapheni, ngaphandle ephilayo, futhi kuhlanganisa ukudla, imithi yokwelashwa lapho uya khona lo ukuya udokotela ukuzijabulisa.
Empeleni, kulesi sibhedlela, kukhona ezinkulu ukuzilibazisa eziyinkimbinkimbi ezimbili: a yezemidlalo yesimanje ebizayo nokuvuselelwa isikhungo. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo nokuvuselelwa waziwa kwezinye izifunda ukuza lapha njengamanje ekwelapheni iziguli kanye Altai Krai futhi Khakassia. Wellness Center inikeza ngamasevisi emphakathini.
Rehabilitation Center "Keys" multidisciplinary. Uphatha izifo emsebenzini, izifo ewumngcingo-sephrofayela, futhi inikeza usizo lwezempilo.
amaphrofayli engeziwe ingashiwo okulandelayo:
Ukwelashwa kwezifo ENT nezinkinga bronchopulmonary.
Ukuthuthukiswa kwe-peripheral nervous system.
Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo nokuvuselelwa Kwenziwa ukunakekelwa zokulandelisa:
Abantu abaye imivimbo.
Iziguli ngemva isilethikusebenza, imisebenzi inhliziyo.
Iziguli ngemva udokotela wamathambo, plastic / amalunga omzimba wokufakelwa, nemilenze ukufanisana.
On Web sites balneology okuthunyelwe ngalokhu esikhungweni sokwelashwa akukona, kodwa ezihlukahlukene ethola sibhedlela "Keys" (saseTomsk) ukubuyekezwa. Services enikeziwe lapha, ukudla kanye nabasebenzi ukusebenza izwakalwa ehlukile izivakashi.
Mayelana izinqubo zokwelapha
Nokho, amaningi izinqubo zokwelapha, ukutholakala abasebenzi abaqeqeshiwe wezokwelapha kanye neqiniso lokuthi okuthunyelwe abonisa izinga ezinhle ukunakekelwa, kufakazelwa impumelelo enkulu enkabeni zokulungisa ukwelashwa, ekululameni kwesiguli.
Mayelana yezokwelapha izinqubo ijaji ngokwakho:
Hydrotherapy: okugeza (9 zinhlobo), ngaphansi kwamanzi emgogodleni traction, umphefumulo (6 izinhlobo).
Massages (7 izinhlobo).
Inhalations (7 zinhlobo futhi usawoti okwami).
Physiotherapy (14 zinhlobo, kuhlanganise kriolechenie).
ukwelashwa udaka (ozocerite, ngobumba).
Ozonolechenie (4 zinhlobo t. H. Ikhamera "esifubeni").
Dry carbon dioxide zokugeza, hypoxic, galolechenie.
Ukufaneleka kanye nokuzivocavoca yokwelapha amakamelo.
Sauna (4 zinhlobo).
izindawo Olubanzi zokuxilonga: ebambe ultrasound luhlolo, ECG, ibhayisikili ergometry, stabilometry imishini yesimanje. Kwamakhemikhali, ucwaningo lwezempilo e-laboratory yethu siqu.
Uxhumano zobuchwepheshe yokwelapha urogenital ( "Androgen", "Intramag", "Mavit").
An database olubanzi nobuchwepheshe bale abasebenzi bezokwelapha, futhi iqashe 17 odokotela, 9 kwako esigabeni eliphakeme, edonsa iziguli ezivela kwezinye izifunda kuleli yokungcebeleka impilo sobunye. SaseTomsk sibhedlela "Keys" idume lonke elaseRussia!
Isakhiwo Wellness ifakwe imishini yesimanje, it has konke okudingayo ukuze ube ukuphumula okuhle futhi ukululama.
3 okugeza eziyinkimbinkimbi, esikhulu, Jacuzzi, Russian.
2 izinhlobo sauna: fitoparosauna kanye infrared;
2 okubhukuda kanye 17h6,5h1,5 6,5h4,5h1,5;
salon beauty zokwelapha;
Igumbi bangaphumula kanjani;
pergola ahlomele izoso;
izinkantolo tennis (ehlobo).
Kungenzeka ukuthenga ithikithi i ukuvakashelwa enwetshiwe. Ngakho, ukubaluleka 1 emahoreni angu isikhokhelo uvakashela okugeza eziyinkimbinkimbi esikhulu (sauna Finnish, okugeza Turkish, a yokubhukuda elikhulu) kusuka 1 kuya 950 k.
Kukhona Izipesheli amakhasimende avamile.
Wellness Center "Keys" (saseTomsk, Russia) - yokungcebeleka, okuyinto imelela cishe zonke isikhungo Wellness kuyinto ezingeni eliphezulu futhi ngamanani ezifanele.
Ngo intengo, ngaphandle izinqubo zokwelapha, indawo yokuhlala kanye ukudla futhi afakiwe ukuzijabulisa. Kukhona ihholo ekhonsathini ne izihlalo 250 kanye nemishini ezemidlalo sokuqasha. Kuningi lokuzijabulisa esikhathini ebusika (amabhiliyade, table tennis, ibha, umtapo, njll) Ingabe unikele izivakashi zayo endaweni yokungcebeleka "Keys" (saseTomsk). Izibuyekezo wabo, kanye izinkambo omuhle. Abantu abaningi bayayijabulela i umdanso nomculo kusihlwa labetibambile lapha, kodwa phakathi bokwenza okukhulunywe ngayo ekupheleni kwabo ngesikhathi 24:00.
Ngokuvamile, iziguli okuthunyelwe Dispensary ukuphakamisa iholide ezihlukahlukene. Lapho uzothola mnandi futhi labo bayathanda ukuphumula ezithathekayo, umoya ohlanzekile, kanye nalabo abazimisele aphumule okunethezekile abahle.
Sergei Yesenin, izinkondlo ekuseni: tinkondlo eyaziwa nezici zabo
Solyanka nge amakhowe - injabulo ngokuba esiswini.